आफ्नै शरीरमा लागेको कस्तो क्यान्सर जुन चर्चित डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले पत्तै पाएनन्
5th May 2018, 08:13 am | २२ बैशाख २०७५
काठमाडौं : बेलायतमा पाँच महिना लामो उपचारपछि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा आफ्नै अस्पतालमा छन्। गत शनिवार नेपाल फर्केका उनी बाँसवारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। अस्पतालले उनको स्वास्थ्यस्थिति स्थिर रहेको बताए पनि उनी आफैले भने धेरै समय नबाच्ने कुरा सार्वजानिक गरिसकेका छन्।
अस्पतालको विज्ञप्ति आएसँगै उनलाई निको नहुने रोग लागेको अड्कल बाजी हुन सुरु भइसकेको थियो। नभन्दै त्यस्ता अड्कलबाजीलाई उनी आफैले स्वीकार गरे। अर्थात् उनले आफुलाई 'वाइल डक्ट' (पित्त थैली) क्यान्सर देखिएको कुरा सार्वजानिक गरे।
चिकित्सकहरुका अनुसार 'वाइल डक्ट' अर्थात् निको नहुने क्यान्सर हो। यो क्यान्सर लागेपछि मानिसको बाँच्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ। अर्थात १ प्रतिशत भन्दा कम।
आत्मविश्वासले क्यान्सर जित्न सकिन्छ र कतिपय मानिसहरु आत्मविश्वसकै कारण क्यान्सर जितेको समेत बताउँदै आएका छन्। तर, वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ अविश अधिकारी भन्छन्, 'आत्मविश्वासले क्यान्सर जित्न सकिन्न। क्यान्सर आत्मविश्वासले जित्ने रोग पनि हैन।'
उनी विश्वभर चर्चित कम्पनी एप्पलका मालिक स्टिभ्स जब्सको उदारण दिँदै भन्छन्, 'स्टिभ्स जब्सको मृत्यु पनि क्यान्सरकै कारण भयो। न उनको आत्मविश्वासले क्यान्सर जित्यो। न त उपचारले नै।'
डाक्टर अधिकारीका अनुसार क्यान्सरका तीन आधार छन् -
त्यसबाहेक उनी 'भाग्य' लाई पनि एउटा आधार मान्छन्। भाग्यलाई मेजरमेन्ट गर्न सकिन्न। त्यसैले उनी क्यान्सरबाट मानिसको बाच्ने सम्भावना कति भन्ने यिनै तीन अवस्थाले निर्धारण गर्ने अधिकारी बताउँछन्।
पित्त थैली वा पित्त नलीको क्यान्सर नराम्रो क्यान्सरको क्याटोगरीमा पर्ने क्यान्सर हो। यस्ता क्यान्सर विकसित देशका विरामीमा पनि ढिलो मात्र देखिन्छ। अर्थात् क्यान्सर लास्ट स्टेजमा आइपुग्दा मात्र थाहा हुने क्यान्सर हो— पित्त नलीको क्यान्सर। डा अधिकारी भन्छन्, 'कलेजो भन्दामुनि हुने भएकाले यस्ता क्यान्सरहरु ढिलो मात्रामा थाहा हुन्छ। अर्थात् जण्डिस भएपछि मात्र क्यान्सर भएको थाहा हुन्छ, त्यो पनि चेकअप गराए मात्र।'
डा अधिकारीका अनुसार कलेजोले पित्त बनाउँछ। कलेजोबाट पित्त बग्दैबग्दै पित्त थैलीमा बस्छ। पित्तको थैलीको पित्त बगेर आन्द्रामा मिसिन्छ। डा अधिकारी भन्छन्, 'पित्त थैली, पित्तको नली र कलेजोको पित्त भनेको फरक कुरा हो। डा देवकोटालाई कुन अंगमा कस्तो क्यान्सर भएको थाहा छैन्। क्यान्सर कुन स्टेजमा छ र कुन अंगमा छ त्यो नि प्रष्ट छैन।'
'किन हुन्न त निको?'
'त्यसो भए किमो थेरापी नगरी किन फर्किए त देवकोटा?'
आफ्नै शरीरमा लागेको कस्तो क्यान्सर जुन चर्चित डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले पत्तै पाएनन् को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)
विवेक [ 2018-05-08 14:23:29 ]
धेरैको उपचार गराउनु भयो। निको होस् भन्ने शुभकामना। तपाई त डाक्टर तपाईलाई आफ्नो रोगको बारेमा राम्रो जानकारी होला। मृत्यु अघि एक दाग पखालेर जानुहोस् आखिर जेठ १९ मा भएको चाही के थियो? भगवानका अगाडि सबैले साँचो बोल्छन् रे।
Ram Hari Adhikari [ 2018-05-05 11:52:29 ]
नेपालले पाएको एउटा सच्चा छोरो, करोडौ नेपालीले माया र सम्मान गर्ने होनहार डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्यको अप्रत्यासित खबर सुनेर हामी सारा नेपाली दुखी भएका छौं। यो लेखिरहँदा मेरो आँखा आँसुले भरिएको छ। भगवान साँच्चै छौ भने हाम्रो प्यारो डाक्टरलाई चाँडै पहिले जस्तै स्वस्थ बनाइदेउ, हामी उहाँ हाम्रो बीचमा पहिले जस्तै मुसुक्क हाँस्दै आएको क्षण पर्खिरहेका छौ।